Okwakho Ukufuna - Abafana Uthando - Bl - Bl Bl - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Okwakho Ukufuna Isilinganiso 4.3 / 5 koku 100
I-26th, inokubukwa okungu-340.6K
Abasebenzisi abangu-84 babekiswe umaka Lokhu
Akukho okusile okwenzeka ku-Jooin. Ungumfundi wakho wasekolishi nje ojwayelekile, obeke ikhanda lakhe phansi futhi endizela ngaphansi kwe-radar. I-Yahwi, ngakolunye uhlangothi, iyinhle kakhulu, ithandwa kakhulu…kodwa futhi isho okuthile. Manje kungani i-heartthrob yekhampasi ithathele intshisekelo kumuntu ngokuphelele? Kumelwe kube nesisusa sangasese...kodwa kunzima ukukukhathalela uma sibhekene nalokhu kubukeka kombulali. Ngabe uJooin uzoba yisigqila sezifiso zakhe? Noma mhlawumbe uzoba inkosi ngokwakhe…
Ungathola okuningi umabhebhana
Isahluko 62 December 2, 2021
Isahluko 61 December 2, 2021
Isahluko 60.1 December 2, 2021
Isahluko 60 December 2, 2021
Isahluko 59 July 23, 2021
Isahluko 58 July 23, 2021
Isahluko 57 July 23, 2021
Isahluko 56 July 23, 2021
Isahluko 55 July 23, 2021
Isahluko 54 July 23, 2021
Isahluko 53 June 8, 2021
Isahluko 50 June 8, 2021
Isahluko 49 June 8, 2021
Isahluko 48 April 20, 2021
Isahluko 47 April 20, 2021
Isahluko 46 April 20, 2021
Isahluko 45 April 20, 2021
Isahluko 44 April 20, 2021
Isahluko 42 April 19, 2021
Isahluko 41 April 19, 2021
Isahluko 40 April 19, 2021
Isahluko 39 April 19, 2021
Isahluko 38 April 19, 2021
Isahluko 37 April 19, 2021
Isahluko 36 April 19, 2021
Isahluko 34 April 19, 2021
Isahluko 32 April 19, 2021
Isahluko 31 April 19, 2021
Isahluko 30 April 19, 2021
Isahluko 28 April 19, 2021
Isahluko 27 April 19, 2021
Isahluko 26 April 19, 2021
Isahluko 25 April 19, 2021
Isahluko 24 February 8, 2021
Isahluko 23 February 8, 2021
Isahluko 22 February 8, 2021
Isahluko 21 February 8, 2021
Isahluko 20 February 8, 2021
Isahluko 18 February 8, 2021
Isahluko 14 February 8, 2021
Isahluko 13 February 8, 2021
Isahluko 12 February 8, 2021
Isahluko 11 January 6, 2021
Isahluko 10 December 4, 2020
Isahluko 9 December 4, 2020
Isahluko 8 December 4, 2020
Isahluko 7 December 4, 2020
Isahluko 6 December 4, 2020
Isahluko 3 November 30, 2020
Isahluko 2 November 30, 2020
Isahluko 1 November 10, 2020
Iqoqo le-K-Books '"kiseki Kusukela ngo-1994": I-Boys Side And Girls Side